Kedu ihe bụ Dama na Philippines? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Kedu ihe bụ Dama na Philippines?
A manyere gi iri Dama?
Kedu ihe bụ akụrụngwa Damas?
Onye chepụtara Dama?
Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme nke Dama?
Kedu otu m ga-esi emeri chess n'ụzọ dị mfe?
Dama bụ egwuregwu a na-eme n'ọwụli elu na Philippines. N'ime ya, ihe nkedo eze nwere ike ijide n'otu akụkụ. 5 × 5 grid nke isi ihe, isi anọ n'ahịrị nke ọ bụla, ọnọdụ ọ bụla na-atụgharị na njedebe njedebe n'akụkụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri.
Otu esi egwu Dama: Mmadụ abụọ na-egwu egwuregwu a, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-enwerịrị 12 "pitsas" (iberibe na dama) nke sitere na bamboo, nkume ma ọ bụ karama. Ha na-aga n'ihu ruo n'ókè na dị ka chess egwuregwu, ozugbo pitsas gị jidere, egwuregwu ahụ ga-akwụsị. Pitsas nwere ike ịgagharị naanị diagonally, ha enweghị ike iri ihe ma ọ bụ jide azụ azụ.
Ndị na-egwu egwuregwu: 2.
Akụrụngwa: bọọdụ nlele 8X8. Ndị na-enyocha ọcha 16 na ndị nyocha gbara ọchịchịrị 16.
Otu esi egwu egwu. A na-etinye checkers n'akụkụ ọ bụla nke ndị egwuregwu ahịrị abụọ na nke atọ dị ka egosiri na foto a.
DaMath bụ egwuregwu bọọdụ mgbakọ na mwepụ ewepụtara site na okwu dama, egwuregwu nlele Filipino, na mgbakọ na mwepụ. Ọ bụ ndị chepụtara ya Jesus Huenda, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị si Sorsogon, Philippines. Ọ ghọrọ ihe ewu ewu na 1980 wee ruo ugbu a na-egwuri egwu n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na Philippines.
DAMA - Data Management Association International họpụtara ndị isi oche mbụ ya na 1988. Isi nke mbụ tọrọ ntọala na 1980 na Los Angeles. … N'afọ 2001, anyị nwere ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị bịara ihe karịrị 1,000 ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa data sitere na mba 24 na nnọkọ mkparịta ụka nke iri na atọ nke afọ anyị emere na Anaheim, California.
Nke a dị mkpa: Ogologo oge ole ka onye ọrụ ahụike na Malaysia nọ?
Nke a bụ ndụmọdụ 10 iji malite gị:
Mụta ihe ndị a na-eme. Iberibe chess ọ bụla nwere ike ịga naanị otu ụzọ. …
Mepee ya na pawn. Bugharịa pawn ahụ n'ihu ma eze ma ọ bụ eze nwanyị square abụọ n'ihu. …
Nweta ndị mma na bishọp pụọ. …
Lelee azụ gị! …
Egbula oge. …
"Castle" MGBE. …
Mwakpo na "Egwuregwu etiti"…
Tụfuo Iberibe n'amamihe.
Enwere m ike ịbanye Indonesia ugbu a?
Ajụjụ: Manila ọ bụ obodo alfa?
Ajụjụ ugboro ugboro: kedu ka m ga-esi bụrụ onye ọkwọ ụgbọ ala Uber Philippines?
Kedu ihe bụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na Philippines?
Ajụjụ ugboro ugboro: Achọrọ m visa maka Maldives si Philippines?
Indonesia ọ ka nwere mmanụ?
Durian ọ bụ nwa amaala Singapore?